Dareenka Liita Ee Casillas, Modric Iyo Ancelotti Ee Ciyaartii Xalay
HomeChampions LeagueDareenka Liita Ee Casillas, Modric Iyo Ancelotti Ee Ciyaartii Xalay
Macallinka Real Madrid iyo qaar ka mid ah xiddigaha kooxdaas oo ka hadlay ciyaartii xalay sida xun loogu jebiyey Real Madrid ayaa waxa ay soo bandhigeen diciifnimada kooxdooda.
Wiilasha Carlo Ancelotti ee Real Madrid ayaa lagu garaacay 4-3 iyaga oo garoonkooda jooga, waliba waxa intaa u dheeraa in dhinac kasta laga fiicnaa ciyaarta, waxaanay ciyaarta xalay sii shaacisay awood la’aanta kooxdaas.
Real Madrid ayaa u baxday wareegga 8-da ee Champions League iyadoo nasiib ku dhaaftay Schalke taas oo kulankii hore ee ka dhacay wadanka Germany ay Madrid ku soo badisay 2-0, taasina ka dhigtay celcelis ahaan in labada ciyaarood ay ku dhamaadeen 4-5. Haddii ay Schalke dhalin lahayd hal gool oo kale, waxa hadhi lahayd Real Madrid.
Ciyaartan ayaa noqonaysa tii afraad ee xidhiidh ah ee aanay Real Madrid arag wax guul ah, iyadoo kulankii ka horreeyey ee horyaalka La Liga ee Atheltic Bilabo lagu garaacay 1-0, halka ay barbar dhac 1-1 ah la galeen Villarreal iyadoo ay ka sii horreysay Atletico Madrid oo 4-0 ku dubatay.
Goolhayaha kooxda Real Madrid, ayaa qiray in kooxdiisu halkii ugu hoosaysay marayso kadib markii ay kooxda Schelke six un ugu garaacday garoonka Santiago Bernabeu ciyaar xalay ku dhex martay labada kooxood.
Casillas oo lagu eedeeyey in uu lahaa khaladka saddexda gool ee hore Ee hore ee ay Schalke ka dhalisay Real Madrid, ayaa waxa uu yidhi isaga oo ciyaarta ka hadlaya: “Waa dhab in hoos u dhac weyni nagu habsaday oo aanu halkii ugu hoosaysay heehaabayno, laakiin arrinta wanaagga ahi waa in aanu ku jirno kooxaha Jimcaha dambe loo qori-tuuri doono” sidaas ayuu yidhi.
“Marka qori-tuurkaas la sameeyo, waxa aanu illoobi doonaa 10 maalmood oo tegay wixii dhacay, kuwaas oo nagu adkaa. Waa in aanu ka fikirno berri, dib ma eegi karno ama kuma seexan karno 22 ciyaarood oo xidhiidh ahaa oo aanu badinay ama wax kale oo aannu hore u gaadhnay”. Ayuu raaciyey.
Casillas ayaa kooxdiisa ka badbaadiyey gool uu wakhti dambe ka dhalin lahaa Benedikt Howedes kaas oo haddii uu dhalan lahaa ay Real Madrid sidaas kaga hadhi lahayd tartanka Champions League, hase yeeshee waxa uu dhinaca kale qirtay in uu khaladaad sameeyey.
Inkasta oo uu xalay uun garoomada ku soo noqday haddana kama uu aamusin in uu ka hadlay guul-darrada kooxdiisa loo xambaariyey iyo hoos u dhaca dunidu la yaabtay ee sannadka cusub ula kowsaday Real Madrid.
Luka Modric oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay, ayaa waxa uu sheegay in ay walaac ku abuurtay guul-darradaasi.
Modric oo muddo saddex bilood ah dhaawac kaga maqnaa ciyaaraha, ayaa kulankiisii ugu horreeyey ee uu kooxdiisa ku soo laabtay, waxa uu la kulmay mid ka mid ah maalmihii ugu adkaa ee kooxdaas soo mara.
“Aad ayay muhiim u tahay in aanu u gudubtay wareegga kale, laakiin si fiican umaanaan ciyaarin waana in mararka qaarkood ay kooxuhu dhibaatoodaan. Anigu ma garan karayo sababaha, waana wakhti hore, laakiin waxa aan ku faraxsanahay in aan kooxda ku soo laabtay” sidaas ayuu yidhi Modrid.
Carlo Ancelotti waxa hortiisa lagu bahdilay ciyaartooyadiisa, waxaanu daawanayay habeen ay goolashu sida daadka ugu socdeen shabaqiisa, hase yeeshee markii uu warbaahinta la hadlay ciyaarta kadib, ayaa waxa uu yidhi: “Haddii aanu u sii ciyaarno sida aanu caawa (xalay) u ciyaarnay, way iska caddahay in aanaan meel fog gaadhi doonin.”.
Ancelotti waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay qaab ciyaareedka kooxdiisa, waxaanu yidhi: “Aad baan uga xumahay, sidii uu qof waliba arkayay, waxa aanu u ciyaarnay si liidata taasina waxay u xun tahay magaca kooxda. Dhamaan dhalleecaynta iyo qaylada taageereyaashu waa arrin gar ah, kaliya waxay noo kordhinaysaa dhiirigelin badan. Wali kalsooni badan ayaan ku qabaa kooxda sababtoo ah waxa aan garanayaa waxa ay samayn karayaan. Waa in aanu sii wadno shaqada oo aanu diiradda saarno in aanu shaqada gacanta ula tagno dhamaantayo sidii hore si ka badan.”
Ancelotti isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Waan la hadlay ciyaartooyada, waananu ognahay in aanu meel xun ku jirno. Waa in aanu dib u eegno difaaca oo ah halka ay khaladaadka oo dhami ka yimaaddeen. Ma jirto koox hore oo afar gool nagaga dhalisay gurigayaga marka laba reebo Barca oo laba ka mid ah goolasheedu ay rikoodhe ahaayeen. Waxa naga luntay isku-duubnidii.”
Tababare Ancelotti waxa uu sheegay in kooxdiisa ay ka luntay kalsoonidii isla markaana jidh ahaan ay u liitaan, dhibaatooyinkuna ka soo gaadheen meelo badan, waliba weerarka, difaaca, cadaadiska, oonista guusha iyo u dhug-yeelashada ciyaarta.
Ancelotti miyuu ka baqayaa in la eryo?
Warbaahinta ayaa weydiisay in uu ka baqayo in maamulka Real Madrid shaqada ka eryo, waxaanu Ancelotti ku jawaabay: “Kama fikirayo arrintaas. Shaqadayda ayaan sii wadanayaa waxaanan isku dayayaa sida ugu wanaagsan ee karaankayga ah in aan u qabto. Waa in aan si ka fiican sidan u qabto sababtoo ah waa masuuliyadda tababare wixii garoonka ka dhacay caawa (xalay). Ilama aha in ciyaartooyadu lumiyeen kalsoonidii ay igu qabeen, dadkuna waxyaabo badan ayay ka hadlayaan laakiin si dhab ah waxba uma shaacinno. Qaab ciyaareedkii kooxdu waa uu liitay, waana wax nagu dhacayay uun illaa bishii December, markaa waa in aanu is habayno.”
Ugu dambayntii Ancelotti waxa uu sheegay in kooxda ay ka luntay kalsoonidii ay ku ciyaaraysay taasina dhibaatada oo dhan u keentay, balse ay si adag u shaqayn doonaan, isla markaana ay isku dayi doonaan in ay xalliyaan meelaha dhibaatadu ka haysato oo dhan.
Magacyada Ciyaartooyada Ku Tartami Doona Xiddiga Yurub Oo La Shaaciyey
15/07/2015 Abdiwahab Ahmed
Samuel Umtiti Oo Noqday Difaaca Ugu Wanaagsan Spain
Ciyaartoygii Somaliland Ee Ka Soo Laabtay Abkhazia Oo Shacabku U Arko Halyeeyo Iyo Xukuumadda & Axaabta Oo Ka Aamusan
11/06/2016 Abdiwahab Ahmed